Ny Oppo's ColorOS 7 dia efa manana daty famotsorana ofisialy | Androidsis
Omaly izahay dia niandry ny fahatongavan'ny kinova famolavolana Oppo manaraka izay, izany hoe ColorOS 7. Ankehitriny, tamin'ny fomba ofisialy, dia nambara fa eny, ho tonga amin'ity volana ity izy, ary ny daty marina hivoahana dia efa ananantsika ary hambara eto ambany izahay.
Tsy mbola fantatsika raha hiorina amin'ny Android 10 fotsiny izy io na amin'ny Android Pie vao ho tonga izy io, saingy azontsika antoka fa ho avy izy io miaraka amina asa vaovao, fanatsarana, endrika nohavaozina ary atiny mahaliana.
Ny 20 Novambra no andro hanaovan'ny mpanamboatra sinoa ny ofisialy ColorOS 7. Nambara izany ora vitsy lasa izay tamin'ny alàlan'ny afisy fampirantiana izay manambara ny hetsika fanombohana, izay hatao any Sina. Ny zava-drehetra dia toa manondro fa ny sosona fanaingoana Oppo vaovao ihany no haseho mandritra ity lanonana ity, fa misy ny mety hisian'ny zavatra hafa amin'ny asa.
Oppo's ColorOS 7 Famoahana daty famoahana
Betsaka ny tsaho momba ny RealmeOS koa. Araka ny tatitra sasany, ity interface ity dia hosoloina ColorOS fanao manokana ho an'ny finday avo lenta avy amin'ny Realme, mba hiavaka amin'ny Oppo. Tsy vinavina fotsiny ihany fa io no nohamafisin'i Shen Yiren, filoha lefitry ny Oppo. Noho izany dia zavatra efa noraisintsika ho zava-poana izany.
Nanangana ny orinasa sinoa ColorOS 6 tamin'ny herintaona tamin'ny novambra. Izy io dia natao ho trano ho an'ny mpampiasa vaovao nohavaozina, ny lalao Game Boost 2.0, ny fampiasa fakan-tsary nohavaozina nohatsaraina, ny lafin'ny fiarovana ary maro hafa.
Na dia tsy dia fantatra loatra aza ny momba ny ColorOS 7 ho avy, Manantena izahay fa mifototra amin'ny OS Android 10 farany tsy misy fangarony. Mbola ho hita eo izay fiasa fanampiny kasain'ny orinasa ampiana ao amin'ity kinova vaovao an'ny hoditra namboarina ity, na dia tsy manantena hahita fanovana lehibe aza izahay amin'ny resaka famolavolana interface tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » ColorOS 7, ny interface custom Oppo, dia efa manana daty famotsorana ofisialy
Ny tsara indrindra azon'izy ireo atao dia ny manao tsara indrindra fa tsy misy fanaingoana manokana, raha tsy hoe raisin'izy ireo ho zanak'olo-mpiray tam-po aminy One Plus. Miarahaba!
Telegram dia manatsara ny famokarana feo amin'ny fanavaozana azy